Isaayyas Daanyew jedhama obboleessa Kinfew Daanyeew yaalii ajjeechaa waxabajji 16 Dr Abiyy irratti raawatame keessaa akka harka qabu himamee ture.. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIsaayyas Daanyew jedhama obboleessa Kinfew Daanyeew yaalii ajjeechaa waxabajji 16 Dr Abiyy irratti raawatame keessaa akka harka qabu himamee ture..
#Isaayyas_Daanyew jedhama obboleessa #Kinfew_Daanyeew yaalii ajjeechaa waxabajji 16 Dr Abiyy irratti raawatame keessaa akka harka qabu himamee ture..bilbiloota Dr butee akka informeshinii isaa ugguraa ture,guyyaa dhohinsa boombichas networkii bilbilaa akka balleesse osoo ragaa qabanii abbaan alagaa mirga wabii qarshii 200,000n geggeesseera…kan keenya inni lubbuu isaa Dr Abiyyiif wareege har’a obboleessi isaa oolmaan isaa dagatamee ulee diinatiin haleelamama fi hidhama jira kun harka nyaates ni ibsa.mee nagaan bulaa!
Oromummaa qofaaf hidhaan akkumaa itti fufeetti jira!
galgalaa kana RIB aanaa daallee sadii magaala
haroo sabbuu keessaa foollee aannichaa keessaa tokko kan ta’e
dargaggoo Geetahuun Daggafaa bakka wbon jiru nutti himi
jechuun ukkamsuun fuudhanii deeman hidhaafi dararaan itti fufee jira.
■.Suurri argaa jirtan kun GOOTOTA ilmaan Oromoo roorroon hammaannan Wayyaanee fuuldura gootummaa dhaan falmaa dhaabbatanii utuu lolanii kanneen harka diinaatti gaafa kufan wayyaaneen gochaa suukaneessaa akkanaatiin uummata yaamtee raawwii akkasii jiilchaf ilmaan Oromoo kanneen irratti raawwatte. Oromoo diina isaa ajjeessaa, falmaa du’uun ykn wareegamuun kabajaa guddaa dha. Bakki gochaan fashitii Wayyaanee kun itti raawwatame godina
#SALAALEE_aanaa_Darraatti gaafa 09/12/2014 ture.
Sababiin gootonno Oromoo kunneen itti bosona seenaniifis roorroo warri ergamtuu wayyaanee OPDO, dabballoota aanaa saniitirraa irra gahaa ture waan dadhaabaniif jiraachuus waan dadhhabaniif tahuutu gabaafama. Maqaan gooticha kanaa
# KATAMAA_WUBETUU kan jedhamu erga dhiirummaasaa fi gootummaasaa loltoota wayyaanee 4 fi foolisoota hedduu galaafatee booda harka diinaatti kufuudhaan gaafa guyyaa 09\_12\_2014, aanaa Darraa, magaalaa
#Gondo_Masqaal irratti wayyaaneen gochaa gara jabummaatiin uummata keenya jiilchuu fi sodaachisuuf hiriyaa isaa walin fannifte.
Dirreen inni itti lolaa ture, aanaa
#DARRAA naannoo #Harbuu_Masqaalee keessatti akka tahe qeerroon aanaa Darraa gabaasaniiru. Jaallan KATAMAA waliin qabsootti bahan ammas qabsoo akka finiinsaa jiraniifi ilmaan Oromoo hundaan hidhadhaa ka’aa! dhaamsa jedhu dhaammataniiru jedhama.
#Eelaa hojii Opdo mana murtii waliigalaa oromiyaaf afaan amaraan carraa hojii beeksiisun maliif barbaachise?
Hafuuraa nafxaanyaa iyyii badi!